Las Las Vegas sano 2 10 bilood ka hor #769
Waa salaaman tihiin, waxaad ka soo dejiseen LV 3 kombuyuutar oo kaladuwan (4.05GB buuxi). Isticmaalka Winrar waxay ku guuldaraysataa inay furfurto faylalka 6x.tiz oo lagu daro faylka 1x.exe. Marar kasta oo odhanaya archive waa musuqmaasuq ama waxaa ku jira noocyo faylal ah oo aan la garaneyn. Unzipper kale miyuu guuleysan doonaa? Hadey haa tahay, midkee, fadlan?
Las Las Vegas sano 2 10 bilood ka hor #770
Ku soo dhawow oo ku soo dhowow Rikoooo. Fadlan fadlan ku dhaji hoosta FSX,FSX Gole hoosaadka Steam? Mawduucan gaarka ah waxaa loogu talagalay xubnaha Rikoooo Forum inay isbaraan.
Mar labaad, soo dhaweyn.
Las Las Vegas sano 2 10 bilood ka hor #772
Las Las Vegas sano 2 10 bilood ka hor #773
Waxaan si fiican u la kulmay arrintaan, sidoo kale waxaan ku guulaystay aniga oo isticmaalaya Izarc:
Soo daji oo ku rakib Ciraaq www.izarc.org/ ka dibna midigta guji archive xulo "Izarc" iyo "Uxeex las_vegas_mega_photoreal_scenery"
Hadda way shaqaysaa
Wax kasta oo aan ku dhajiyo archive cusub Rikoooo sidaas dhowr saacadood gudahood waxaa loo hagaajin doonaa qof kasta.
Waan ka xumahay dhibaatada, ma fududa inaad wax ka qabato faylasha waaweyn,
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: dabeecada
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.258